Anyị na-alụ ọgụ megide Peodophiles - Baba Ijesha Saga
Entertainment Nwere ike 2, 2021
Mgbe ebubo arụrụ ala nke Olarenwaju James Omiyinka, nke a maara dịka Baba Ijesha, malitere site n'usoro ihe nkiri na-adịghị agwụ agwụ nke metụtara comedienne a ma ama, Adekola Adekanya, aka Princess, ndị uwe ojii, omee Yomi Fabiyi, na ọha na eze, onye na-eme ihe nkiri Iyabo Ojo ọ dị ka onye ekwuwa okwu na-achọ ikpe ziri ezi n'aha onye eboro ebubo.
O mere ọtụtụ vidio iji mee ka mkpebi ya doo anya na imetọ ụmụaka, ndina n'ike, na ime ihe ike ụmụ nwanyị, na-agbakwunye na ọ ga-ekpe onye ọ bụla mere mpụ ndị a ikpe n'agbanyeghị agbanyeghị njikọ ha na ya.
“Baba Ijesha bụ ihe ihere nye Ihe nkiri Yoruba ụlọ ọrụ n'ozuzu ya. Ọ dị mkpa ka a taa ya ahụhụ. Ọ bụrụ na ejidere onye otu ezinụlọ, enyi, ma ọ bụ onye ọrụ ibe m, ma ọ bụ ọbụna nna m ma ọ bụ nne m ma ọ bụrụ na ha ka dị ndụ, ma ọ bụ ọbụna ụmụ m, n'ime omume ọjọọ a, agaghị m eguzo n'akụkụ ha. Ọgba aghara nke Baba Ijesha bụ ọgbaghara anyị n'ihi na ọ dọbara anyị n'apịtị, na agaghị m ekpuchi ya. "Ana m emegide ihe ọjọọ na mpụ ọ bụla megide ụmụaka na ụmụ nwanyị," ka o kwuru.
Onye omee ahụ were iwe were oke iwe site na nsonye nke onye ọka iwu ibe ya bụ Yomi Fabiyi, onye dọrọ ndị ọrụ ibe ya aka na ntị ka ha jiri nwayọ zọọ ụkwụ n'okwu a ebe ọ na-eme nyocha ugbu a, na-achọ ka ekpughere ihe nkiri CCTV nke Baba Ijesha metọrọ nwatakịrị ahụ n'ihu ọha. Iyabo agaghị enwe nke ọ bụla, na-azọrọ na ọ ga-eme ka nwatakịrị nwanyị ahụ dị afọ 14 karịa, wee gaa n'ihu na-akpasu onye na-eme ihe nkiri vidiyo ndị ọzọ na-agbasa iji gosipụta ikpe ya.
Mgbe ọ matara maka atụmatụ ịtọhapụ Baba Ijesha na mgbapụta, ya na ndị ọzọ, gụnyere comedienne Princess, nne na-azụ nwa ahụ, wakporo Policelọ Ọrụ Ndị uwe ojii Panti ebe a na-edebe Baba Ijesha iji kwụsị atụmatụ ahụ.
O were Lagos Kọmitii nke ndị uwe ojii Hakeem Odumosu iji mee ka obi dajụọ ụfọdụ mgbe o kwuchara na ndị nta akụkọ na Baba Ijesha'Mmejọ bụ belila. CP kwukwara, dabere na vidiyo CCTV, na enweghị ihe akaebe nke mmeru. Onye uwe ojii na Lagos Steeti kwupụtara na mwakpo metụtara mmekọahụ ma ọ bụghị mmetọ.
Otú ọ dị, ọha mmadụ ekwenyeghị n'ụzọ zuru oke nke CP maka vidiyo vidio nke a hụrụ ka Baba Ijesha na-ekwupụta mpụ ma na-arịọ mgbaghara.
Iyabo Ojo Kwuru Yomi Fabiyi Maka Imeghachi Na Nna Ijesha Mmepe Ya April 28, 2021
Yomi Fabiyi, Baba Ijesha, a vowedụọla iyi ị du ndị mmadụ ga-eme ngagharị iwe megide echichi kamera CCTV Nwere ike 4, 2021
Aka na akpo News: Anyi jidere kpakpando Nollywood, Baba Ijesha maka ebubo idina otu nwa agbogho April 22, 2021
Comedian kọwara otu m si jide Baba Ijesha na Mmekorita Nwanyi di iri na ano April 28, 2021
Mercy Aigbe, Davido na ndị ọzọ na-akatọ Baba Ijesha na ndị na-akwado ya maka mmejọ mmekọahụ April 28, 2021
Ihe onyonyo a na-agbagha - Uche Jombo, Simi, Tacha na ndị ọzọ na-aza ihe nkiri CCTV nke Baba Ijesha na-emegbu nwatakịrị dị afọ 14 Nwere ike 3, 2021
Agaghị m ala azụ n'ihe gbasara Baba Ijesha - Iyabo Ojo Nwere ike 12, 2021
Tags:adekola, kọmịshọna ndị uwe ojii, ijesha, iyabo ojo, ojo, yomi fabiyi, ihe nkiri yoruba